တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: November 2007
Posted by မေဓာဝီ at 3:36 AM0comments
’၄’ နဲ့ ‘၃’ လိုပဲ …
’၄’ နဲ့ ‘၃’ လိုပဲ …
အမြဲ မခွဲမခွါ ရှိနေကြတယ်။
’၄’ နဲ့ ‘၃’ လိုပဲ…
တယောက်မျက်နှာ တယောက် ကြည့်နေကြတယ်။
’၄’ နဲ့ ‘၃’ ပေါင်းတဲ့အခါ…
ကံကောင်းစေတဲ့ ‘၇’ ဂဏန်းရသလို
သာယာလှပတဲ့ ဘ၀ကလေးတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ်။
အဲဒီ ’၄’ နဲ့ ‘၃’ ဟာ
လွယ်လွယ်နဲ့ ဖြစ်လာခဲ့တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
စက္ကန့်၊ မိနစ်၊ နာရီတွေ စုစည်း
အဲဒီ ’၄’ နဲ့ ‘၃’ ရဲ့
စေတနာနဲ့ အကြင်နာများစွာ ပေါင်းပြီး
၄၃-နှစ် ဆိုတဲ့ ခရီး…
မကြာသေးသလို ခဏလေးလို့ပဲ ထင်နေမှာ
အတူ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေသား။ ။
၂၉၊ ၁၁၊ ၂၀၀၇
(အမေနဲ့ အဖေရဲ့ ၄၃ နှစ်မြောက် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့ အမှတ်တရ)
ကျမ ငယ်ငယ် ဘယ်အရွယ်က စပြီး လမ်းလျှောက်တတ်တယ်ဆိုတာ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ မွေးခါစ ပက်လက်ကနေ မှောက်လျက်၊ ပြီးတော့ တွားသွား၊ လေးဘက်သွား၊ နောက်တော့ ငုတ်တုတ်၊ ဒီ့နောက် မတ်တပ်ရပ်ရာက တလှမ်းခြင်း ယိုင်တိယိုင်ထိုး လျှောက်ရင်း တဖြည်းဖြည်း ဖြောင့်ဖြောင့် လျှောက်နိုင် … နောက်ဆုံး ပြေးနိုင်တဲ့ အထိပေါ့။ ဘယ်အရွယ် က ဘယ်အရွယ်အထိ အဲဒီလို အဆင့်ဆင့် သွားခဲ့ရတယ် ဆိုတာကတော့ ကျမ သေချာ မသိပါဘူး။ သေချာတာကတော့ ကျမဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လမ်းလျှောက်တတ်ပြီ လို့ ထင်ခဲ့မိတာပါပဲ။
တကယ်တမ်း ကျမ လမ်းကောင်းကောင်း မလျှောက်တတ်သေးဘူး ဆိုတာ တနေ့မှာ သိလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီနေ့က နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ပေါ့။ ကျမတို့ ကျောင်းသားတွေ အားလုံးကို ကျောင်းက အကုန်အကျခံပြီး တနေရာကို လိုက်ပို့ပေးပါတယ်။ အဲဒီနေရာက ရေခဲပြင်မှာ စကိတ်စီးတဲ့ နေရာပါ။ ရေခဲပြင်ပေါ် စကိတ်စီးတာကို အရင်က ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာသာ မြင်ဖူးတာမို့ အတွေ့အကြုံရအောင် ကျမလည်း လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဟိုရောက်တော့ တယောက်ပြီး တယောက် တန်းစီ၊ လက်မှတ်လေးတွေ ဖြတ်ပေးပြီး အထဲမှာ အဲဒီ လက်မှတ်နဲ့ ဖိနပ် ယူရပါတယ်။ ကိုယ့်ဖိနပ်တွေကို ချွတ်ပြီးအပ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ ဖိနပ် အရွယ်အစားကို ပြောရင် သူတို့က သင့်တော်ရာ ဖိနပ်ကို ထုတ်ပေးတယ်။ အဲဒါကို စီးပြီးရင် ရေခဲပြင်ပေါ်မှာ စကိတ်စီးဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီပေါ့။
ကွင်းထဲမှာ သီချင်းတွေက မြူးမြူးကြွကြွ၊ မီးရောင်စုံတွေက တဖျတ်ဖျတ် တောက်ပ၊ လူငယ်လေးတွေက သွက်လက် ဖြတ်လတ်စွာ ကစားနေကြလို့…။ ကျမကတော့ ဖိနပ်စီးပြီးကတည်းက လမ်းလျှောက်ရတာ အဆင်မပြေ တော့ပါဘူး။ ရိုးရိုး လမ်းလျှောက်ဖိနပ် (ဝေါကင်းရှူး) နဲ့တောင် ကိုယ်က စီးနေကျ အလေ့အကျင့် မရှိလို့ ခြေထောက် နာရတဲ့အထဲ အဲဒီ စကိတ်စီး ဖိနပ်နဲ့ဆို တွေးသာ ကြည့်ကြပါတော့။ ဒီလိုနဲ့ ယိုင်တိုင်တိုင် လမ်းလျှောက်ရင်း ကွင်းထဲကို ရောက်သွားတယ် ဆိုရင်ပဲ …
`အမလေး … ဗုဒ္ဓေါ´
လျှောခနဲ စလစ်ဖြစ်သွားလို့ ဘေးနားက ဘောင်ကို ကမန်းကတန်း ကိုင်လိုက် ရပါတယ်။ လဲကျတော့မလားလို့ ရင်ထဲလည်း တဒိန်းဒိန်းနဲ့…။ လဲသာ ကျလို့ကတော့ ပြန်ထလို့ လွယ်မယ် မထင်ပါဘူး။ အေးလွန်းလို့ အထပ်ထပ် ၀တ်ထားတဲ့ အင်္ကျီတွေ ဘောင်းဘီတွေနဲ့ လူတကိုယ်လုံး ကျပ်စည်းသလို ဖြစ်နေတဲ့ အပြင် အဲဒီ ဖိနပ်ကြီးနဲ့ ဘယ်လိုလုပ် ပြန်ထလို့ လွယ်ပါလိမ့်မလဲ။
ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်လိုက်တော့ သူများတကာတွေ တလျှောလျှောနဲ့ စီးနေလိုက်ကြတာ၊ က-ရင်း စီးနေတဲ့ လူတောင် ရှိသေး။ ဒါနဲ့ သူတို့ ခြေထောက် အနေအထားကို လိုက်ကြည့်တယ်။ ဘယ်လိုရွှေ့တယ်၊ ဘယ်လို ရပ်တယ်၊ ဘယ်လို လှုပ်ရှားတယ် စသဖြင့် လေ့လာပြီး သကာလ ကြိုးစား ကြည့်မိပြန်တယ်။
`အလိုလေး … ဘုရား ဘုရား´
လူက ရှေ့ကို မှောက်ရက် လဲတော့မလို ဟပ်ထိုး ဟပ်ထိုး ဖြစ်သွားလို့ ဘေးဘောင်ကို အမြန် ကိုင်လိုက်ရပြန်ပါရော။ အေးလွန်းတဲ့ နေရာမှာ လူလည်း ချွေးစေးတွေကို ပြန်လို့။ ရင်တွေ တလှပ်လှပ် ခုန်လို့…။ မဖြစ်ပါဘူး ဘယ်နှယ့် လုပ်ရပါ့။ ကွင်းထဲ ရောက်ပြီးမှ အလျှော့ပေးလို့တော့ မဖြစ်ဘူး။ ကိုင်း … နောက်တခေါက်၊ တလှမ်း … နှစ်လှမ်း … သုံးလှမ်းမြောက်မှာ လူက Balance မမျှဘဲ ယိုင်သွားပြန်ပါတယ်။
`၀ှူးး … ခက်ပါဘိ´
အရှုံးပေးရမလို ဖြစ်နေပြီ။ သီချင်းသံတွေက ပိုပြီး မြူးကြွလာတယ်။ လူတွေရဲ့ အော်သံ၊ ရယ်သံ၊ စကားပြောသံ တွေကလည်း ဆူညံလို့ …။ နောက်ဆုံးတော့ ကျမ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူများတွေလို တလျှောလျှောနဲ့ မစီးနိုင်ရင်တောင် ဒီကွင်း တပတ်တော့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ရအောင် လျှောက်မယ်လို့ပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ ဘေးဘောင်ကို ကိုင်ပြီး ခြေလှမ်းတွေကို သတိကြီးစွာ လှမ်းရင်း တလှမ်းခြင်း ကျမ လျှောက်လာလိုက်တယ်။ နည်းနည်း လျှောက်လိုက်၊ နားလိုက် လျှောက်နေတဲ့ ကျမကို ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က ရယ်ချင်ပက်ကျိနဲ့ ကြည့်နေကြ လေမလားဘဲ။ ဘောင်မရှိတဲ့ ၀င်ပေါက် ထွက်ပေါက် နေရာက အဖြတ်၊ ခြေ သုံးလေးလှမ်းစာလောက်ကို အသက် အောင့်ရင်း အမြန် ဖြတ်လိုက်ရတယ်။
`အိုး … ဆောရီး´
ရွှီးခနဲ အနားရောက်လာတဲ့ မိန်းကလေး တယောက်နဲ့ တိုက်မိမလို ဖြစ်လို့ အမြန် တောင်းပန် လိုက်ရတယ်။ သူကတော့ ပြုံးပြီး လက်ပြသွားလေရဲ့။ ကျမမှာတော့ ယိုင်ထိုး ယိုင်ထိုးနဲ့ တလှမ်းခြင်း လျှောက်နေရတုန်းပါပဲ။
ဘောင်ကို ကိုင်ပြီး နားနေကြတဲ့ လူတွေက ကျမ အနားရောက်လာတာနဲ့ အလိုက်တသိ ရှောင်ပေးကြပါတယ်။ တချို့က မမြင်လို့ မရှောင်ပေးတဲ့ အခါ ကျမကပဲ သူတို့ကို ကွင်းရှောင်သွားရတယ်။ အဲဒီလို ရှောင်သွားလို့ ဘောင်ကို လက်လွှတ်လိုက်ရတုန်း တော်တော်လေး ဟန်ချက်ပျက်ပြီး လူက လဲကျမလို ဖြစ်သွား ပြန်ပါတယ်။ တော်သေးလို့ … အနား ရောက်လာတဲ့ ကျောင်းက ဆရာမက အမြန် လက်လှမ်း ကမ်းလိုက်တာနဲ့ အောက်အထိ လဲကျ မသွား တာပါ။
တပတ်ပြည့်အောင် မနည်း အားတင်းပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း လျှောက်သာ လျှောက်နေရတယ်။ လူက စိတ်ညစ်လှပြီ။ ချော်လဲမှာစိုးတာက တကြောင်း၊ ဖိနပ်ကြီးကြောင့် ခြေထောက်နာတာက တကြောင်းလေ။ စိတ်ညစ်ပေမဲ့ ဘယ်တတ်နိုင်လဲ …။ ဒီအရပ်ကို ရောက်လာမှတော့ ဒီဖိနပ်စီးပြီး ဒီလိုပဲ လျှောက်ရတော့မှာပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ပဲ နောက်ဆုံးတော့ ကွင်းကျယ်ကြီး တပတ် တုန်တုန်ရီရီနဲ့ လျှောက်နိုင် သွားပါတယ်။ အပြင်ကို ထွက်တော့မှ သက်ပြင်းကို ဟူးခနဲ ချပြီး မြေကြီးပေါ် ခိုင်ခိုင်မာမာ ခြေချလိုက်ရတာ အလွန်ကို အားရှိသွားသလိုပဲ။ ခုံတခုမှာ အမြန် ထိုင်နားလိုက်ရင်း …
`ငါဟာ လမ်းတောင် ဖြောင့်အောင် မလျှောက်တတ်သေးပါလား´ … လို့ ကျမ တွေးနေမိတယ်။
ကျမ လမ်းမလျှောက်တတ်သေးပါဘူး။ အခုအချိန်မှာ ကျမဟာ ခြေလှမ်းတွေ ကို စမ်းတ၀ါးဝါး လှမ်းရင်း ဘယ်အချိန် ချော်လဲကျလေမလဲ … လို့ တထိတ်ထိတ်နဲ့ လျှောက်နေရသလိုပါပဲ။ ကိုယ့်ခြေထောက်ကို ကိုယ် စိတ်မချတဲ့ အတွက် လက်ကလည်း တစုံတခုကို မြဲမြဲ ကိုင်ထားရပါ သေးတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဟန်ချက်ညီအောင် မနည်းထိမ်းပြီး လျှောက်နေရတဲ့အတွက် တခါတလေ ယိမ်းယိုင်ပြီး သူတပါးကို မတော်တဆ တိုက်မိမလိုလည်း ဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။ တခါတလေ … အမှီအတွယ် ကင်းစွာ လက်လွှတ်လိုက်ရတဲ့အခါ … ဘေးနားမှာလည်း တွဲမယ့် လက်တွေ မရှိတဲ့အခါ မျိုးမှာတော့ … ပြိုလဲကျမတတ် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲ ယိုင်လဲပါစေ … လဲကျပါစေ … ဖြည်းဖြည်းခြင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် … ဒဏ်ရာ အနာတရတွေနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် … နောက်ဆုံးမှာတော့ လိုရာခရီးကို ဘယ်နည်းနဲ့မဆို အောင်မြင်စွာ ရောက်နိုင်ရမယ်လို့ အားတင်းရင်း … … …
ဘ၀ ရေခဲပြင်ပေါ်မှာ လမ်းလျှောက် နေမိပါတော့တယ်။
၂၅၊ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၇
ည ၁၁း၁၃ နာရီ
(မှတ်ချက်။ ကူညီစာရိုက်ပေးသော ကိုစေးထူးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။)
Posted by မေဓာဝီ at 3:25 PM 1 comments
Posted by မေဓာဝီ at 11:56 AM7comments
Posted by မေဓာဝီ at 5:58 PM 1 comments
Posted by မေဓာဝီ at 10:10 PM0comments
ကျွန်မရဲ့ ဘလော့ဂ်ကို လာဖတ်သူများကို တကယ်ပဲ အားနာမိပါတယ်… ကျွန်မ အနေနဲ့ ဘလော့ဂ်အတွက် စာတွေ အမြဲရေးချင်ပေမယ့် ခုချိန်မှာ အခြေအနေက မပေးပါဘူး. ကျောင်းက ကွန်ပြူတာတွေအားလုံးက မြန်မာဖောင့်ထည့်လို့ မရတော့ ဘလော့ဂ်မှာ စာတင်ချင်ပေမယ့် တင်လို့ မရဖြစ်နေပါတယ်. စာမရေးရရင် မနေနိုင်လို့ အားတဲ့ အချိန်လေးမှာ စာရွက်နဲ့ ဘောလ်ပင်နဲ့ ချရေးထားရပါတယ်.
အားတဲ့ အချိန်ဆိုတာကလည်း ည ၁၀ နာရီ နောက်ပိုင်းမှပါပဲ. ဒါပေမယ့်လည်း ၁၀ နာရီ ကနေ ၁၂ နာရီလောက်ထိပဲ ရေးနိုင်ပြန်ပါတယ်. ၁၂ ကျော်ရင် မအိပ်လို့ မရဘူး. မနက်မှာ စောစောထရမှာမို့ ၁၂ ကျော်ထိနေရင် နောက်တစ်နေ့အတွက် အဆင်မပြေနိုင်လို့ပါ. မြန်မာဖောင့် မရှိတော့ ဘလော့ဂ်ကို ရေးလို့ မရတဲ့အပြင် တစ်ချို့ဘလော့ဂ်တွေကိုလည်း ဖတ်လို့ မရပါဘူး. တစ်ချို့ဘလော့ဂ်ကျပြန်တော့ ဖတ်လို့ရတယ်. Comment ရေးလို့ မရဘူး. ဆီဘောက်စ်မှာ ရေးလို့ မရပြန်ပါဘူး. ကျွန်မရဲ့ ဘလော့ဂ်ကိုတောင် အစကဖတ်လို့ မရဘူးဖြစ်နေတာ. တစ်နေ့ကမှ ကိုရန်လေးကို အကူအညီတောင်းပြီး EOT ပြန်လုပ်ပေးလို့ ဖတ်လို့ရသွားပါပြီ. အဲဒီ့အတွက် ကိုရန်လေးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်.
အဲဒီ့လို့ အဆင်မပြေမှုတွေကြောင့် comment တွေလည်း မှန်မှန်မပြန်နိုင်. ဘလော့ဂ်ကိုလည်း မှန်မှန်စာမတင်နိုင်တာပါ. အဲဒီ့အတွက် နားလည်ခွင့်လွှတ် ပေးကြစေလိုပါတယ်ရှင်…
အခု ကိုရန်လေးက ကျွန်မကို ကူညီပြီး စာရိုက်ပေးမယ်လို့ ဆိုလာတာကြောင့် ကျွန်မစာ မှန်မှန်တင်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါတော့မယ်. ကူညီစာရိုက်ပေးတဲ့ ကိုရန်လေးကို ထပ်မံကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း…
23rd Nov, 07
(This is just for testing. Pls forgive me spelling errors and punctuation errors.)
Posted by မေဓာဝီ at 9:56 PM0comments
ပျံသန်းနေတဲ့ ငှက်မလေးတွေနဲ့ယဉ်ပါး …
ပြေးလွှားနေတဲ့ တိမ်လွှာတွေကိုစီးနင်း …
၀ိုင်ချိုချို တခွက်ပြီးတခွက်သောက်ရင်း …
လေညင်းတွေနဲ့ သီချင်းဆို …
ကိုယ်စီ ကိုယ်ငှ ပျော်ပါးနေလိုက်ကြတာ … ။
ကောင်းကင်မှာ ကြယ်တွေလင်းနေပေမဲ့ …
ခုထိအောင် အမှောင်ကျလျက်ပါပဲ …
ကောင်းကင်ထက်က လူအများ …
ဒါကို ဘယ်လို ခံစားပေးကြမလဲ … ။
ဟိုးအောက်ကို ငုံ့ကြည့်လိုက်လေ …
မြေပေါ်မှာ … လူတွေ … ငိုနေကြတယ်
လူတွေ … မြေပေါ်မှာ … ငိုနေကြတယ်
ငိုနေကြတဲ့ … လူတွေ … မြေပေါ်မှာ …
သင်တို့တွေ မသိရှိလေရော့သလား …
သင်တို့တွေ မကြည့်မိလေရော့သလား … ။
ရင်ဘတ်နဲ့ခံစားရင် သိနိုင်ပါတယ်လေ … ။
ပါးစပ်ထဲထွက်ရာ ဖရုသ၀ါစာတွေ ဆဲနေပြီးတော့မှ
လူကြားကောင်းအောင် မေတ္တာပွါးပြမနေပါနဲ့ …
စေတနာထားတာပါလို့ ကြွားလုံးထုတ်မနေပါနဲ့ …
နားထဲမှာ ခါးသက်လွန်းလို့ပါ … ။
မြေကြီးကို မြဲမြဲနင်းလိုက်စမ်းပါ …
ရဲဝံ့ဖို့တော့ လိုတာပေါ့ … ။
ကောင်းကင်ပေါ်က မိတ်ဆွေများရယ် …။
မျက်ရည်ပင်လယ်ထဲ မျောလိုမျော …
ကောင်းချီးပေးကြိုဆိုပါလိမ့်မယ် … ။
စစ်မှန်တဲ့ ကရုဏာတရား …
မျက်ရည်များကို ခြောက်သွေ့စေနိုင်ပါတယ် …
ဖြူစင်တဲ့ မေတ္တာတရား …
အားလုံးကို လုံခြုံမှုပေး … နွေးထွေးစေနိုင်ပါတယ် …
ခိုင်မာတဲ့ စေတနာတရား …
အရာအားလုံးကို ကျော်လွှားစေနိုင်ပါတယ် …
ဘယ်လိုလဲ မိတ်ဆွေ …
မြေကြီးပေါ်ကို ခြေချဝံ့ရဲ့လား …
မညာဖို့တော့ လိုတယ်လေ … ။
၁၇၊ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၀၇
Posted by မေဓာဝီ at 7:58 PM 8 comments
“ကျောင်းကိုသွားမယ် … လွယ်အိတ်လွယ် … ပျော်ပျော်ပါးပါးကွယ် …
ခေါင်းလောင်းထိုးသံ သာယာတယ် … ကျောင်းတက်ပါပြီကွယ် …”
… … … … …. … … … … ….
ငယ်စဉ်တောင်ကျေး ကလေးဘ၀ ကျောင်းနေခါစအရွယ်ကတည်းက ကျောင်းတက်ဖို့ အလွန်ပျင်းခဲ့သည်။ ကျောင်းသွားဖို့ တွန့်ဆုတ်သည့်ထဲမှာ ဆရာမကို ကြောက်တာလည်း ပါ၏။ ကျောင်းမသွားချင်၍ အိပ်ချင်ယောင် ဆောင်နေလို့ တမျိုး၊ နေမကောင်းဘူးဟု အကြောင်းပြလို့ တဖုံ ခဏခဏ ကျောင်းပြေးဖူးသည်။ ကျောင်းပြေးသည်ဆိုလို့ သူများတွေလို ဟိုဟို သည်သည် သူငယ်ချင်းတွေနှင့် လျှောက်သွားခြင်းမဟုတ်။ အိမ်မှာပဲ အိပ်လိုက် စားလိုက် နေရုံ သက်သက်မျှသာ။
ကျောင်းတက်ပျင်းပြီး ကျောင်းကိုမုန်းသည့် သူ့ကို အမေက အထက်ပါ သီချင်းလေးဆိုပြကာ ချော့မော့အားပေးခဲ့ဖူး၏။ တခါတလေလည်း ခေါင်းမာလွန်းသည့် သူ့ကို စိတ်မရှည်စွာ မာန်မဲလို့ပေါ့။ ထိုစဉ်က အမေ ဘယ်လိုပင် အားပေးပေး၊ အော်ငေါက်ငေါက် သူကတော့ ကျောင်းတက် ပျင်းစမြဲ … ။ ဆရာမတွေနှင့် အဆင်မပြေဖြစ်စမြဲ … ။ ကျောင်းတက် ခေါင်းလောင်းထိုးသံကို ငှက်ဆိုးထိုးသံအလား နားထဲမှာ ကြားယောင်စမြဲ …။
အဲဒီလို ကျောင်းနှင့် သဟဇာတ မဖြစ်လွန်းလှတဲ့သူ့အဖို့ ဒီအရွယ်ကြီး ရောက်ခါမှ ကျောင်းတက်ရဖို့ ဖန်လာပြန်ပါပြိ။ မြည်တွန်တောက်တီး တလှည့် အားပေးဖျောင်းဖျတလှည့် ပြုလုပ်ပေးမည့် အမေကလည်း သူ့အနားမှာ မရှိနိုင်သည့် ဒီအချိန်မှာ အမေဆိုပြခဲ့ဖူးသည့် ထိုသီချင်းလေး ကိုသာ တတမ်းတတ သတိရနေမိပါတော့၏။
နိုဝင်ဘာလ (၂) ရက်၊ သောကြာနေ့
ထိုညနေခင်းက ဘူတာရုံကလေးမှာ သူစောင့်နေခဲ့ရသည်။
စုံစီနဖာထည့်ထားသော အထုတ်အပိုးများနှင့် အိတ်ကလေးကို စလွယ် သိုင်းကာ လာကြိုမည့် တစုံတယောက်ကို စောင့်မျှော်လျက်။ သတ်မှတ်ချိန် လွန်သည်ထိ ထိုသူက ရောက်မလာ။ နာရီကြည့်လိုက် ထိုင်လိုက် ထလိုက် ဂနာမငြိမ်စွာ စောင့်နေ၍ အတော်ကြာမှ သူ့နာမည်ရေးထားသည့် စာရွက် ကိုင်ထားသူတဦးကို တွေ့လိုက်ရသည်။
ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ နှုတ်ဆက်ကြ၊ မိတ်ဆက်ကြပြီးနောက် အထုတ်အပိုး တွေ ကားပေါ်တင်ကာ ကျောင်းရှိရာသို့ သူ့ကို ခေါ်ဆောင်သွားလေတော့ သည်။
လာခေါ်သူ Pavi ဆိုသော ကောင်ကလေးနှင့် ကားမောင်းသူ ဘရာဇီး အမျိုးသမီး Isabel တို့၏ မေးခွန်းများကို ဖြေရင်း … သူကလည်း သိချင်တာ တွေ ပြန်မေးရင်း … ဘူတာရုံမှ ကျောင်းဆီသို့ တရိပ်ရိပ်ပြေးနေသော ကားကလေးပေါ်မှာ …
သူ … ပျော်နေပါသလား ???
ဟင့်အင်း … မပျော်ပါ။
ဒါဆို စိတ်ပျက်နေသလား ???
ပျော်ခြင်း မပျော်ခြင်း အလျဉ်းမရှိ၊ ၀မ်းနည်းဝမ်းသာခြင်းကင်းမဲ့လျက် ငူတူတူကြီး ဖြစ်လို့သာနေ၏။ အေးစက်စက်ရာသီဥတု .. နှင့် .. အကျွမ်းတ၀င် မရှိလှစွာသော သူစိမ်းတို့အလယ်သို့ ရုတ်တရက် ပစ်ချခံ လိုက်ရသည့်အလား။ အူကြောင်ကြောင် ရောက်ရှိသွားသည့် ညနေခင်းပင်တည့်။
ကားပေါ်ကဆင်း၊ အထုတ်အပိုးတွေ ချရင်း ကောင်းကင်ကြီးကို မော့ကြည့် လိုက်တော့ နက်ပြာရောင် မှောင်မဲနေသည့် ကောင်းကင်ထက်မှာ ကြယ်ပွင့် တွေက တဖျတ်ဖျတ် တောက်ပ လင်းလက်လို့ … ။
ဒီကောင်းကင်ကြီးပါပဲ … သူတို့အားလုံးကို အုပ်မိုးနေတာ … ။
ဒီကြယ်ပွင့်တွေပဲ … နေရာတိုင်းမှာ လင်းလက်တောက်ပ နေမှာ … ။
ကဲ … ဘာများ အားငယ်စရာလိုသေးလို့လဲ … ။
သူတို့အားလုံးဟာ ကောင်းကင်ကြီး တခုထဲရဲ့ အောက်မှာပဲ မဟုတ်လား။
Pavi က အထုတ်အပိုးတွေ ကူသယ်ပေးကာ သူနေရမည့် အခန်းဆီ လိုက်ပို့ ပေး၏။ သစ်ပင်တွေ မြက်ခင်းပြင်ကျယ်ကြီးတွေနှင့် ကျောင်းဝင်းကြီးက ကျယ်ပြောလှသည်။ ကျောင်းဆောင် အဆောက်အဦးများကတော့ အိုမင်း ရင့်ရော်စွာ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်လို့ နေ၏။
“ဒီအဆောက်အဦး နာမည်က Mozambique တဲ့။ နောက် term ကျမှ အဲဒီမှာ နေရမှာ။ လောလောဆယ် မင်းနေရမယ့် အခန်းက ဟိုးနောက်ဆုံး အဆောက်အဦးမှာ ရှိတယ်။ အဲဒီအဆောက်အဦးနာမည်က Malawi တဲ့။ ဟောဟို အဆောက်အဦးလေးကတော့ Chinese Embassy လို့ နာမည် ပေးထားတာ။ ရုပ်ရှင်ပြရင်တို့၊ presentation တို့ meeting တို့ လုပ်ရင် အဲဒီမှာ လုပ်တာပေါ့”
လမ်းတလျှောက် Pavi က သူ့ကို ရှင်းပြသွားသည်။ အဆောက်အဦး နာမည်တွေကြားရတာနှင့် အာဖရိက ရောက်နေသလို ခံစားလိုက်ရသည်။ သူနေရမည့် အဆောက်အဦးရှေ့ရောက်တော့ …
“Welcome to Malawi House” ဆိုတဲ့ အစိမ်းရောင်နဲ့ ရေးထိုးထားသော စာတန်းကလေး အ၀င်တံခါးဝမှာ ကပ်ထားသည်ကို တွေ့ရ၏။
“ဒါက အိမ်သာ၊ ဒါက ရေချိုးခန်း၊ ဒါက ဧည့်ခန်း၊ ဟောဟိုမှာ မင်းရဲ့ အခန်းပဲ …”
သူနေရမည့်အခန်းက ဧည့်ခန်းနှင့် ကပ်လျက်အခန်းကလေး ဖြစ်သည်။ ဒီအခန်းမှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ နေရဦးမလဲ … သူမသိ။ လောလော ဆယ်တော့ ဒီအခန်းလေးမှာ ခေတ္တ နားခိုရပေဦးမည်။
Pavi ကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီး နှုတ်ဆက်ရင်း အခန်းလေးဆီ လျှောက်သွားလိုက်သည်။ အခန်းလေး၏ တံခါးဝမှာတော့ စာတန်းလေးတခုက သူ့ကို ကြိုဆိုလျက် … ။
ည ၉ နာရီ ၄၃ မိနစ်
Posted by မေဓာဝီ at 6:03 PM2comments
Posted by မေဓာဝီ at 5:13 PM 10 comments
ကိုယ့်ရပ် ကိုယ့်ရွာနဲ့ဝေး … မိသားစုနဲ့ဝေး … ချစ်တဲ့သူတွေ အားလုံးနဲ့ အဝေးကြီးမှာ ရောက်နေတဲ့အပြင် လောလောဆယ် ကွန်ပျူတာနဲ့ဝေး … အင်တာနက်နဲ့လည်း ဝေးနေတာမို့ ဘလော့မှာ စာအသစ်တွေ မတင်ဖြစ်တာပါ။ ဘယ်လိုပဲ ဝေးနေပေမဲ့ ကျမ ဘလော့လေးနဲ့တကွ ဘလော့ဖော် ဘလော့ဖက် အားလုံးကို အမြဲသတိတရ ရှိလျက်ပါပဲ။ အခု အချိန်ခဏလေး အားခိုက်မှာ အကြံအဖန်လုပ်ပြီး အမြန်အဆန် ဒီစာလေးကို တင်လိုက်ပါတယ်။ လာမယ့် စနေ တနင်္ဂနွေကျမှပဲ အသေအချာ ရေးနိုင်ပါတော့မယ်။ မအားလပ်တဲ့အပြင် အလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဘ၀ဆိုတာကြီးကို လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတာမို့ … နားလည်ပေးကြပါလို့ပဲ … အားလုံးကို တောင်းပန်ပါရစေရှင် … ။
၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၇
Posted by မေဓာဝီ at 4:06 PM6comments
ပေးစာကို မရေးတာကြာလို့ ဝေးကွာနေသလိုပဲ ခံစားရပါတယ်။ (ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး နဘေထပ်ကြည့်တာ။) ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လကတည်းက “ပေးစာအပိုင်း (၁၈)” ကို ရေးပြီး ဆက်မရေးဖြစ်သေး တာကြောင့် ဒီကနေ့တော့ ရေးအုံးမှပါပဲလို့ တွေးမိတာနဲ့ အပိုင်း (၁၉) ကို ဆက်ရေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီပေးစာအတွက် ကိုးကားနေကျ “ကဗျာစွယ်စုံကျမ်းကြီး” ကို လေးလို့ သယ်မလာနိုင်ပေမဲ့ အိမ်ကိုလှမ်းပြီး မှာလိုက်တော့ စာတိုက်ကတဆင့် ပို့ပေးတာကြောင့် ပြန်ရေးနိုင်တာပါ။ ကိုးကားစာအုပ်သာ မရှိလို့ကတော့ ဒီပေးစာကဏ္ဍ တခဏ နိဂုံးချုပ် နေရဦးမှာပဲ။
အပိုင်း (၁၈) မှာ သုံးချက်ညီ ပိုဒ်စုံရတုနဲ့ ပတ်သက်လို့ နန်းတွင်းမိညိုနဲ့ န၀ဒေးကြီးတို့ရဲ့ ရတု နှစ်ပိုဒ်ကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အခုဒီတပတ်မှာလည်း နမူနာ ရတုတွေကို ဖော်ပြပါဦးမယ်။
အခုဖော်ပြမယ့် ရတုကတော့ န၀ဒေးကြီးရေးသားခဲ့တဲ့ သဝေမပါ ပိုဒ်စုံရတု ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အချီအချ ကာရန်အားလုံးတူပြီး သဝေထိုးမပါအောင် အဆန်းထွင် ရေးသားထားတဲ့ ရတုတပုဒ်ပါ … ။
၁။ တစ်ရစ်ဖြိုးဝှန်၊ ရိုက်ကြည်းတွန်လျက်၊ ယုဂန်ချက်၏၊ ဆီတည့်တည့်က၊ မည်သည့်ခြင်းရာ၊ မသိသာခဲ့၊ စိမ်းပြာဖြူညို၊ နီလိုဝါကြဉ်၊ ကင်းဟန်ပုံပွင့်၊ န်ိမ့်မြင့်လိမ်ယှက်၊ ပန်းချီပြက်သို့၊ ကိုးမျက်နှာလုံး၊ ကုံးသီရန်းရန်း၊ စိမ်းပန်းခြူးညွန့်၊ ဖြုတ်ချည်းဖြန့်လျက်၊ လန့်ခဏသာ၊ လျှပ်ပြက်ဝါနှင့်။ … ။ သာယာချိမ့်မည် ရင့်ဘိသည်။
၂။ ချစ်တင့်နိုးလွန်၊ ဘုန်းချင်းညွှန်၍၊ နတ်တန်ရုပ်ရည်၊ ထင်မူးနှည်နှင့်၊ မည်သည့်ဖြစ်အင်၊ ဆံမျှင်မခြား၊ သစ်သစ်ပွား၍၊ သည်းဖျားဝန်လှိုက်၊ လွမ်းစဉ်ကြိုက်တွင်၊ တိမ်တိုက်ယှက်ဆိုင်၊ ကျူးကာအိုင်လျက်၊ သံပြိုင်သီပြီ၊ လူလျှင်ချီသို့၊ မိုးချီသံလျက်၊ ဆင်းသက်ဘနန်း၊ လှည့်ဝန်းအာကာ၊ ရင့်သံဝါ နှင့်။ … ။ ဗျာပါစိမ့်မည် ဆင့်ဘိသည်။
၃။ နစ်မြင့်ကြိုးဟန်၊ ပမာပြန်ပိမ့်၊ ဘုန်းဝှန်ပ-၀င်း၊ ဇမ္ဗူမင်းလျှင်၊ ထွန်းဝင်းလျှံ ညိ၊ ၀ိမုတ္တိကို၊ မသိသည်ဖြစ်၊ ဆယ်နှစ်မက၊ ငံ့လင့်မှလျှင်၊ ဖူးရယှဉ်စုံ၊ ဘုန်းချင်းဆုံအံ့၊ ထုံးပုံထိုဟန်၊ နှိုင်းသင့်ရန်သား၊ ငါးကြည်စုံအင်၊ မိသခင်မူ၊ မဆင်တန်ဆာ၊ အတိုင်းသာနှင့်။ … ။ ဖျာဖျာငြိမ့်ကြည် သင့်ဘိသည်။
နောက်တပုဒ်ကတော့ သတ်စေ့နှက် သုံးချက်ညီ ပိုဒ်စုံရတု ဖြစ်ပါတယ်။ သတ်စေ့နှက် သုံးချက်ညီလို့ ခေါ်ရခြင်းကတော့ ရတုရဲ့ အချီိပိုဒ်ချင်း၊ အချပိုဒ်ချင်း အက္ခရာလုံးရေအားဖြင့်၊ အစပ်အားဖြင့် ထပ်တူညီမျှထားပြီး ချီချ ရေးသားထားတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်ထဲမှာ နမူနာပြထားတဲ့ ရတုကတော့ လက်ဝဲသုန္ဒရအမတ်ကြီးရဲ့ မဲဇာတောင်ခြေ ပိုဒ်စုံရတုပါပဲ။ ကျမဘလော့မှာ ဖော်ပြပြီးသားမို့ ထပ်မံ မဖော်ပြတော့ပါဘူး။ “ဒီနေရာမှာ” ပြန်လည်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်တပုဒ်ကတော့ ကိုယ်တွင်းပြည့် သတ်စေ့နှက် သုံးချက်ညီ ပိုဒ်စုံ ရတုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တွင်းပြည့်လို့ ဆိုရခြင်းကတော့ အချီအချကာရန် တွင်မက ၀မ်းတွင်းပိုဒ်တွေ အချင်းချင်းပါ အပိုဒ်ရေချင်း၊ အစပ်ကာရန်ချင်း အလုံးစုံ ထပ်တူညီရေးသားထားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရရဲ့ ရတု ကို နမူနာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ မြသွယ်ရောင်လျှံ၊ ကုံး၍ပန်လျက်၊ ၀င်းစံကြွေရွက်၊ ဖူးသစ်ထွက်သော်၊ အခက်မြုတေ၊ မြရွက်ထွေ၏၊ ထုတ်ပေဘော်ပြ၊ သွယ်တံလှနှင့်၊ မွှေးမြထုံလွတ်၊ ပန်းဖက်ဆွတ်ကို၊ ချိုးညွတ်ခုပင်၊ ကျွမ်းလက်သင်၍၊ ကေရှင်သွယ်မြ၊ ဆင်တိစသည်၊ ညှာမြရွှေရည်၊ အေးဘိသည်။
၂။ လှသွယ်ခေါင်စံ၊ သုံးရွှေ့ရံလျက်၊ မင်းစံရွှေညက်၊ ဦးသစ်ခက်သော်၊ အညက်စုဝေ၊ လှညက်ခြေ၏၊ နှုတ်ထွေတော်စ၊ ငယ်သံမြနှင့်၊ မှေးရရုံမြတ်၊ ထွန်းသက်မှတ်ကို၊ ကြိုးလတ်ခုပင်၊ ကျွမ်းရက်ပင်၍၊ နေ၀င်ဝယ်စ၊ မြင်မိရသည်၊ ခါရဖွေနည်၊ ရေးဘိသည်။
၃။ မြရွယ်တောင်ယံ၊ ရုံးတွေ့စံလျက်၊ တင်းသံစေခက်၊ ကြူးနှစ်သက်သော်၊ ပလျက်မြုတေ၊ မျှသက်ဝေ၏၊ ဟုတ်နေတော်စ၊ ကြယ်ဘံလှနှင့်၊ သွေးချပုံခတ်၊ ရွှန်းညက်ထွတ်ကို၊ ညှိုးဆွတ်ရှုချင်၊ တမ်းလျက်ကြင်၍၊ ရွှေစင်ဆယ်စ၊ ထင်ဘိကြသည်၊ ကာလထွေလည်၊ သေးဘိသည်။
ဒီတပတ်တော့ ဒီရတု ၂ ပုဒ်နဲ့သာ ကျေနပ်ကြပါဦး။ ရတုအခန်းမှာ နမူနာ ရတုတွေက အများကြီးပါပဲ။ အဲဒီရတုတွေ အားလုံးပြီးရင် ပျို့တွေ မော်ကွန်းတွေ လာပါဦးမယ်။ အားရင် အားသလို ရိုက်ထားပြီး ခါတိုင်းလို တပတ်ခြားတခါဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေသလို တင်နိုင်အောင် ကြိုးစားပေးပါ မယ်။ လောလောဆယ်တော့ … ဒီမျှပါပဲရှင် … ။
ကိုပြူးကျယ်နဲ့တကွ မြန်မာကဗျာ မြတ်နိုးသူအပေါင်း … နှစ်ထောင်းအားရ ရှိနိုင်ကြပါစေ … ။
၂၊ ၁၁၊ ၀၇
နံနက် ၁၀ နာရီ ၄၀ မိနစ်
Posted by မေဓာဝီ at 10:38 AM 13 comments
Posted by မေဓာဝီ at 11:43 AM9comments